TRF na Redio - Relọ Regwọ --gwọ - Lovehụnanya, Mmekọahụ na ịntanetị
Home TRF na Radio
A kpọrọ Mary Sharpe isonye Sarah Brett na Radio 5 na-ebi ndụ iji kparịta ịrị elu dị egwu na-adịbeghị anya n'ọnụ ọgụgụ ndị na-eto eto chọrọ ọgwụgwọ ọgwụgwọ mmekọahụ na NHS. Na mkparịta ụka a na 7 October 2019 anyị na-amụta ihe a chọrọ n'okpuru afọ 19 maka ọgwụgwọ ịgwọ ọrịa wee bilie okpukpu atọ naanị n'ime afọ ole na ole. N'ime oge 2015 ruo 2017 enwere ndị nlekọta NHS 1,400 maka ndị na-eto eto na ndị na-agwọ ọrịa mmekọahụ. N'ime oge ọzọ site na 2017 ruo 2019 nke a toro ihe dịka 4,600. Kop se Mary ekerede aban̄a nte ndise idan̄ esisan̄ade anam mme ukpụhọde emi.
PM bụ akụkọ mgbasaozi na usoro ihe omume ugbu a na Radio 4, agbasa ozi na UK, na gburugburu ụwa dum. Na Monday 1st April 2019 Evan Davis weputara akụkụ 6 nkeji site na onye nta akụkọ Chris Vallance na UK Age Age nkwenye iji belata ụmụaka ohere ịnweta ihe nkiri ịntanetị siri ike. Mary Sharpe, CEO nke TRF, kwuru ihe kpatara iwu a ji dị mkpa, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụghị zuru oke.
Radio Radio Radio Scotland bụ netwọk anyị. TRF apụtawo na ọtụtụ egosi na ị nwere ike ịchọ anyị mgbe niile BBC Sounds.
Retalọ ahịa na-ere ahịa n'ịntanetị Boohoo.com nwere otu mgbasa ozi ya nke Iwu Advertisingkpụrụ Mgbasa Ozi machibidoro maka iji slogan "Zipu nudes" iji kwalite uwe ndị nwere akpụkpọ anụ. Mary Sharpe sonyeere Jess McBeath na ndị ọzọ na-ekwu okwu na Kaye Adams gosipụtara na 17 October 2019 na-ele anya amamihe nke ikpe ahụ site na echiche nchebe ụmụaka.
Kedụ nsogbu ndị na - eto eto na - eme? Mary Sharpe pụtara na Good Morning Scotland na 3 Septemba 2019 tinyere Rape Crisis Scotland. Gụkwuo banyere sexting na iwu na Scotland Ebe a.
Site n'ịma ọkwa ụbọchị nkwalite maka Ịgba Ọchịchị na UK, Mary Sharpe sonyere na ekwentị Laura Maxwell na nke 18 April 2019. Nchịkọta 6 nkeji na-esonụ na-egosipụta echiche ya na akpatre nke usoro ihe omume ahụ.
Ịgwa ndị na-eto eto banyere porn bụ isiokwu maka arụmụka na-akwado Kaye Adams na 20 March 2019. E gosipụtara Mary Sharpe tinyere Sarah, otu n'ime mums si na Channel 4 docu-series "Mums Make Porn", Andrea Chapman bụ onye ndụmọdụ na pro-porn activist Jerry Barnett.
Ntị Mary Sharpe na-ekwu maka nkwenye na ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na obere oge na Stephen Jardine gosi na 15 February 2019.
John Beattie na-enwe mkparịta ụka mmụọ na-akpali agụụ mmekọahụ na-eji na 20 November 2018. Ndị ọbịa ahụ bụ Mary Sharpe, Anne Chilton sitere na mmekọrịta ndị Scotland na Emma Kenny.
Stephen Jardine gbara ajụjụ ọnụ bụ Mary Sharpe, tinyere onye nkụzi na nne na-eche nche na Radio Scotland nke mmemme ụtụtụ n'etiti 17 July 2018.
Meri McNally gbara ajụjụ banyere Mary Sharpe site na Radio Napier na oghere 10 nkeji na Drug Drugs. E bipụtara ya na 27 October 2017.
Redio karịrị Scotland
Ozi Radio Sputnik World Service na Moscow gbara ajụjụ ọnụ banyere Mary Sharpe maka oge 11. N'oge a gbara ajụjụ ọnụ, ha kwurịtara banyere ịrị elu na-awụ akpata oyi n'ahụ nke mmekorita ụmụaka na-akọ na England na Wales. A na-agbasa ya na ndị na-ege ntị n'ụwa nile na 9 October 2017.
Mary Sharpe gbara ụka site na Stig Abell na ebe a 3 nkeji na LBC Radio na London, 21 August 2016. Ọ gara UK dum.
Mary Sharpe na-ekwurịta okwu banyere ịzụ ọzụzụ na porn na mkparịta ụka 18 nkeji na Stephen Nolan na Radio Ulster na Northern Ireland.
Pịa Ebe a ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụkwu mkparịta ụka metụtara ya na mmemme telivishọn Stephen Nolan.